Izvo Zvakanakisa Zviwanikwa Zvekuwedzeredza Yako Corporate Mabloggi Maitiro | Martech Zone
Chipiri, Kurume 13, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mukugadzirira kutaura kune SharpMinds boka nezve Corporate Blogging, ini ndadhonzera pamwechete zviwanikwa zvishoma kubva kunzvimbo zhinji. Ndingadai ndakaremerwa kana ndikasavatenda pachena. Zvakare, ndiri kupa yekupa kune vanhu zviwanikwa uye zvinongedzo kudzokera kune aya vanhu 'mawebhusaiti.
Kuti ndikuudze chokwadi, munguva yakapfuura ndaipesana nemablogging emakambani senge zano. Muchokwadi, ndakanyora izwi iri clog nekuti ndizvo zvinowanzoitika kana iwe ukaedza kuita zvine hungwaru kana kuyerwa mu blog. Zvinodzosera kwauri. Ndakaona yakawandisa mienzaniso mizhinji yemakambani akanaka blogging kuti ive inopesana nayo zvekare. Makambani angadai ari kuita chikanganiso kana vasina kushandisa teknolojia iyi muhurongwa hwavo hwese hwekutaurirana.
Nei uine Corporate Blogging Kuvapo?
Zvenguva pfupi yapfuura ini ndave kutanga kucherechedza makambani mazhinji anokoshesa izvo mabloggi anopa makambani avo nevatengi, kunyanya:
Inopa iyo kambani nevashandi vayo kuratidzwa sevatungamiriri vanofunga muindasitiri yavo.
Inovandudza kuoneka kwekambani. Muchokwadi, zvinoenderana nemamwe manhamba, 87% yevamwe vanoshanyira mawebhusaiti emakambani vanozviita ipapo kuburikidza nemablog.
Inopa vashandi vako, vatengi, uye tarisiro ine chiso chevanhu kukambani yako.
Inoburitsa iyo blogosphere uye yekutsvaga injini matekiniki ekuvandudza yako kambani kuwanikwa paInternet.
Kuti uite zvinobudirira, pane mamwe mazano makuru kunze kwemambure. Heano mimwe mienzaniso:
Funga nezvekuisa pamwechete komiti yeblogi iyo inotarisira mablog, zvirimo, inosundira kutora chikamu, uye inobvumira mabloggi kukambani.
Kurudzira mabloggi ako kuti averenge mablog uye uwane mazano avo kubva kumablog. Kushambadzira uye Press Kuburitsa zviwanikwa zvinoonekwa sekusaita uye zvinotarisirwa pasi nemabloggi - kazhinji nekuda kwekutenderera, kusavimbika uye zvakafanotenderwa zvemukati.
Tsanangura musoro wenyaya kune yako blog, chinangwa, uye yako yekupedzisira chiratidzo. Taura izvi pablog rako zvinobudirira uye uone kuti ungaera sei kubudirira kwako.
Shingairira zvawatumira uye taura nyaya yacho. Kutaura nyaya ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekudzidzisa vanhu pane yako meseji. Vakuru vanotaura nyaya vanogara vachikunda.
Tora chikamu uye batanidza vaverengi vako. Vabvumire kukurudzira uye kupindura pamisoro yako uye vabate neruremekedzo rukuru. Tora chikamu mune mamwe mablog uye batanidza kwavari. Iyo 'nharaunda yesimba' iyo iwe yaunofanirwa kubatana nayo.
Vaka chivimbo, chiremera uye chako chiziviso. Pindura nekukurumidza uye zvinobudirira. Sezvo iwe paunovaka kuvimba, saka nekambani yako.
Vaka simba. Blogs haisi yezve posvo, ivo vari pamusoro peiyo akateedzana ezvinyorwa. Iwo akasimba mabloggi anovaka mukurumbira uye kiredhiti nekusunda zvakakosha zvemukati nguva dzose.
Hechino chiono changu cheiyo 3 akabatana zano rakakura rekublogi rinosanganisira, iyo Kubhururuka Triangle:
Imwe trackback yakataura pane iyo posvo kuti dhizaini yakashaikwa kubva pazere zano. Kana tichitaura nezvazvo Corporate Blogging Maitiro, Ndinotenda kuti dhizaini yakakosha - asi yakatemerwa neKushambadzira. Ini ndaizotarisira kuti mubatanidzwa watove neakakura webhu dhizaini uye kuvepo ndisati ndanyura mukubloga. Kana zvisiri, ivo vanonyanya kuzviwedzera kune iyo rondedzero!
Ndeapi maRisk aripo?
Mune isiri-kune-ichangoburwa bhuku rekirabhu yemusangano, takabvunza mumwe wevaipinda, gweta, izvo zviri pamutemo zvine chekuita nevashandi mabhulogi Akataura kuti yaive njodzi imwechete semushandi iyeye achitaura chero kumwe kunhu. Muchokwadi, mazhinji mabhuku evashandi anofukidza zvinotarisirwa nezviito zvevashandi ivavo. Kana iwe usina bhuku remushandi rinovhara maitiro anotarisirwa evashandi vako, pamwe unofanirwa! (Kunyangwe blogging).
Heano anonakidza mareferenzi pane iyo ZVINOITWA uye HAZVIITI zvekubloga kubva padanho repamutemo.
Zvimwe zvekuwedzera zvinhu zvekukurukura:
Iwe uchaita sei nekushoropodzwa, kusangana kwakashata, uye kupindura? Zvinokurudzirwa kumisikidza zvinotarisirwa kumberi pamusoro pekuti makomendi achagadziriswa sei nekutambirwa pane yako blog. Ini ndaikurudzira chirevo chekutaura chechero blog yemubatanidzwa.
Iwe unozoona sei kuona brand control? Iwe haudi mabloggi ako anovhiringidza nemateuro, marogo, kana izwi rechako chigadzirwa. Gadzira maoko.
Iwe uchaita sei neako mabloggi ayo asina zvibereko? Itai kuti mabloggi enyu agamuchire mutemo pamberi pemaoko uko kutora chikamu hakusi kwekumanikidza chete, asi kuti kusarira kumashure kunozovatorera kuratidzwa. Ipa 'em bhuti! Kuchengetedza kuenderana kuburitsa kwemisoro kiyi kune chero blogging zano.
Iwe unozoita sei nekuratidzwa kwepfuma yehunyanzvi iyo yakakosha kune bhizinesi rekambani?
Mabhuku ekuverenga pane iyo Nhaurwa:
Corporate Kubhuroka kweDummies - Yakanyorwa neni!
Iyo Corporate Blogging Bhuku: Chaizvoizvo Zvese Zvaunoda Kuti Uzvizive.
Dhijitari veAboriginal: Iyo Direction yeBhizinesi Izvozvi: Zvisikwa, Nomadic, uye Inogara-Inochinja.
Kukurukurirana Wakashama: MaBlog ari Kuchinja Sei Nzira Bhizinesi Rekutaura nevatengi.
Corporate Blogging Zano uye Zviwanikwa
Ruzivo rwese ini rwandakaisa pamwechete mune ino posvo rwakafemerwa kuburikidza nehumwe hwakawanda maratidziro pamusoro kana mune ino runyorwa pazasi. Pakanga paine akawanda akawandisa mareferenzi kune zvakadzama pano. Ini ndakaunganidza ruzivo rwakawanda zvandaigona uye ndakaedza kuzviisa pamwechete mune imwechete posvo iyo yaizopa kutarisa kwakanyanya kwemaonero eanyanzvi akati wandei pamazano emakambani ekublogi. Ndinovimba varidzi veaya mablog vanozvikoshesa - vanokodzera kiredhiti kose nekuda kweichi posvo!
Ini ndinokurudzira chero munhu anoshanya kuti apedze nguva pane imwe yeaya mablog. Izvo zviwanikwa zvinoshamisa!
Ungatanga Sei Blog
Kubloga Kubudirira Kudzidza neNortheastern University
Iyo squarespace Insider
Diva Kushambadzira Blog
Kugadzira Vanoshuva Vashandisi
Corporate Blogging Mienzaniso
Iyi posvo yaisazove yakakwana pasina kupa zvimwe Corporate Blogging zvinongedzo. Vamwe vari pamutemo yemablog mablog asi ini ndinofunga zvakakosha kutarisa zvisina kufanira yemablog mablog zvakare. Iyo inopa humwe humbowo hwekuti kana iwe ukafunga kusabloga nezve yako kambani kana brand, mumwe munhu anogona!
Microsoft Inovandudza Network Blogs
Yepamutemo Google Blog
Matt Cutts: Gadgets, Google uye SEO
Yahoo Tsvaga Blog
Corporate Blogging Kutsvaga Kugonesa
Mabhizimusi nevatengi vari kutsvaga kwavo kunotevera online kutenga kuburikidza nekushandisa zvemukati uye zvemablog mablog zvinopa izvo zvemukati. Izvo zvakati, pane nhanho dzaunofanirwa kutora kune ese ari maviri kugadzirisa yako chikuva (kazhinji WordPress) pamwe nezvako zvemukati. Paunoburitsa kapeti tsvuku kuGoogle, ivo vanonongedza zvemukati uye vanowedzera kusvika kweako zvemukati zvakanyanya. Bryant Tutterow akanyora akateedzana pakugadzirisa yako blog - ive shuwa kuti uverenge kuburikidza iyo uye kufona DK New Media kana uchida rubatsiro.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kupindura uye wedzera yako yaunofarira Corporate Blogging Links!
Tags: Bloggingmablogging madhairekitoriblogging zviwanikwakubatanidzwa bloggingyemakambani blogging mienzanisokubatanidzwa kubhurogira madummitesyemakambani mabloggi madhairekitorimazano emakambani ekublogi
Mar 13, 2007 pa 9: 46 PM
ndatenda nekuratidzira kublogi kubudirira kudzidza. Semumwe wevaviri vatungamiriri vanyori vekudzidza, chaive chinangwa chedu kubatsira nharaunda nemamwe matipi ekublogi kubudirira.
Mar 13, 2007 pa 10: 15 PM
Chidzidzo chakanakisa. Ini ndakayerera kuburikidza nayo asi handikwanise kumirira kuti ndichere mukati mayo zvakadzama. Waita basa rakakura nekupa izvi! Kuita zvakanaka!
Mar 14, 2007 pa 1: 57 AM
Funga nezvekuisa pamwechete komiti ye blog iyo […] inobvumidza mablogiki kukambani.
Saka chaizvo blog yemubatanidzwa ingave yezuva nezuva / yevhiki kuunganidzwa kwekutengesa hurukuro? Sezvo iwe pachako uchiti:
Kushambadzira uye Press Kuburitsa zviwanikwa […] zvinotarisirwa pasi […] nekuda kwe […] zvakatenderwa zvirimo.
Ini ndinofunga kunze kwekunge iwe wagadzirira kuvhurika uye usango chingodzima zvisina kunaka zvirevo, kambani inogonawo kunamatira kune yako yekare webhu zano. Kungofanana nezano rekuvandudza chinzvimbo chekutsvaga richafukurwa seizvi.
Mar 14, 2007 pa 2: 06 AM
Pa rwechipiri kuverenga chirevo changu chekupedzisira chakaratidzika kunge chakaipa. Icho chaisava icho chinangwa. Yakakura posvo iwe yawakanyora, Douglas.
Ini ndanga ndichingonongedzera kuti kambani inofanirwa kuona bhurogu seinopfuura imwe chete chiridzwa chekushambadzira. Iyo nzira yakananga kumutengi, asi chete kana ikashandiswa a) pachena uye b) senzira mbiri dzekutaurirana chishandiso.
Mar 14, 2007 pa 6: 44 AM
Handina kuzvitora zvisina kunaka, Martin. Ini ndinobvumirana newe… Handifunge kuti Blog reKomiti rinofanira kubvumidza zvese zvemukati - asi ndinofunga kuti komiti inofanirwa kutora nguva kuona kuti mablog ari kugara pane zvirimo, ichipa matipi nemhinduro, uye ichikurudzira.
Ini ndinobvuma - kana iyo blog komiti iri kuongorora, kugadzirisa, uye kuongorora zvirimo - iyo blog icharasikirwa nekuvimbika kwayo uye kuverenga munguva pfupi. Ini ndichave nechokwadi chekujekesa izvo muhurukuro yangu.
Neniwo ndinobvumirana… kana iwe uchiramba uchipindira kushambadzira uye PR kutenderera sechikamu chako blogging zano, iwe unogona zvakare kungo chengetedza webhusaiti!
Mar 14, 2007 pa 8: 18 PM
Doug - yakanaka posvo! Ndiri kushanda mukugadzira blog yemubatanidzwa izvozvi uye ndawana zviwanikwa zvakawanda zvekushandisa mune ino posvo. Basa rakanaka - maita basa!
Mar 14, 2007 pa 8: 25 PM
Ndatenda zvikuru, Patrick! ndine download zvakare, kana iwe uchida kuishandisa. Ini ndakangozviisa manheru ano (mushure mekuprinda stack pa Kinkos ramangwana)
Jun 11, 2007 pa 11: 11 PM
Ndakanga ndichida kuziva nezvekutora kopi yakaoma kana chimwe chinhu chandaigona kuprinda kubva pachidzidzo ichocho. Zvinonakidza kwandiri kuti ndiunze izvi nevatengi.
Ini ndinofunga mumwe wevatengi vangu hombe anogona kuvaka "clog"
Zvita 13, 2007 na10: 05 PM
Zvingave zvakanaka kana mamwe emakambani eblog blog mienzaniso achibva kumakambani asiri-techy.
Dec 14, 2007 pa 2: 54 AM
Ndiyo mhinduro huru, yiu! Ini ndinonyatsoda kudhonza mimwe mimwe mienzaniso mukati. Ini ndinofunga kune tani mune yekufambisa agency.
Aug 6, 2015 pa 10: 57 AM
Corporate blogging se zano izano rakakura fo rme ..
Panzvimbo pekushandisa midhiya kusimudzira bhizinesi, isu tinofanirwa kutanga kuvaka blog inosanganisira zvinhu zvakawanda sekunyora zvinyorwa zvinoita kuti veruzhinji kana vangangove vatengi, sarudzo chaiyo yemisoro uye zvinonyanya kukosha ipe yakakosha yezvinyorwa zvemukati vaverengi.
Izvi zvinokubatsira iwe kugara kwenguva refu mumusika uye kusimudzira bhizinesi rako.
Skytech - Blogger yekuMalaysia